Naya course » रामबहादुर कुरुम्वाङ : सिनियरलाई पन्छाउँदै कसरी पाए दाङको सीडीओ ? रामबहादुर कुरुम्वाङ : सिनियरलाई पन्छाउँदै कसरी पाए दाङको सीडीओ ? – Naya course
रामबहादुर कुरुम्वाङ : सिनियरलाई पन्छाउँदै कसरी पाए दाङको सीडीओ ?
काठमाडौं/सिनियर सहसचिवहरुलाई गृह मन्त्रालयमै थन्काएर उपसचिव रामबहादुर कुरुम्वाङलाई दाङ जिल्लाको सीडीओ बनाइएको छ ।
कुरूम्वाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको रोजाइमा परेको र उनीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कन्भिन्स भएको स्रोतको भनाइ छ । कुरुम्वाङले भने मिलेर काम गर्ने शैली भएकाले सबैले मन पराउने गरेको बताउँछन्
हाल उपसचिव रहेका कुरुम्वाङ दाङको सीडीओ बनेपछि उनले लाए(अह्राएको काम तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले गर्नुपर्ने छ । उपमहानगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सहसचिवको दरबन्दी छ ।
कुरूम्वाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको रोजाइमा परेको र उनीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कन्भिन्स भएको स्रोतको भनाइ छ ।
तर सुर्खेतमा हाजिर हुन नपाउँदै उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानियो र गृहबाट दाङ पठाइयो । ‘कोभिडको कारणले म सुर्खेत जानै पाइनँ । अख्तियारले फेरि गृहमै पठाइदियो,’ उनले कारण खुलाए । आगामी आइतबार दाङ हाजिर हुने उनको तयारी छ ।अनलाईन खबरबाट